:Bọchị: Disemba 19, 2019
Ankara Eskişehir Elu Ahịa Taịtọ Ahịa YHT Oge na Oge: insgbọ oloko na-agba ọsọ nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ njem na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. [More ...]
Ekrem İmamoğlu Said Channel İstanbul bụ Rent project
Onye isi CHP Kemal Kılıçdaroğlu, “Ochịchị ime obodo na Mgbakọ Njem Nleta,, IMM Onye isi Ekrem İmamoğlu n’ihu igwefoto arụpụta ọnụego, ihe mgbazinye ụgwọ ụlọ” ka ha kọwara İstanbul Channel Istanbul yük buru ibu. Gibi dị ka à ga-asị na mgbaasị ezughị. [More ...]
Mahadum Munzur ga-akpọ ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ
Ka ewee ha n'ọrụ n’ime ngalaba nke Rectorate nke Mahadum Munzur, dị ka usoro iwu Iwu dị elu Nọ 2547, Iwu na nkwalite na ntinye nke ndị otu na ngalaba maka nkwado na nhọpụta nke ndị otu. [More ...]
Onye isi akwukwo nyocha emere na Uzun Yurduntepe Ski Resort
Onye ode akwụkwọ ode akwụkwọ ukwu nke Karaịdee Special Special Mehmet Uzun, Ilgaz Mountain National Park Kastamonu Pụrụ Iche Nlekọta nke Yurduntepe Ski Ihe owuwu na-aga n'ihu. Secretary General Mehmet Uzun, soro [More ...]
Emechara Emechaala okporo ụzọ Crimea Bridge
Dabere na Agencylọ Ọrụ Russia Maka Ecology, teknụzụ na Njikwa Nuclear (Rostehnadzor), ngalaba ụzọ ụgbọ oloko nke Crimea Bridge na-ejikọ Krasnodar na Crimea na Kerch Strait. Dabere na akụkọ ahụ na Sputniknews; “Rostehnadzor, the Crimean Bridge [More ...]
Coast Guard Black Sea Repair Support Command İŞKUR opekata mpe, ndị gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, mara ọkwa na iwebata ndị ọrụ KPSS na-enweghị nsogbu. Coast Guard Command na-ekwupụta na ọ ga-eweghachi ndị ọrụ 16 na-adịgide adịgide Ọrụ Nkwado Mmezi Oké Osimiri Ojii [More ...]
KARDEMİR Onye na-azụ ụgbọ njem mbụ
Mgbe privatization ghọtara KARDEMİR dịkwuo mmepụta ike nke 2 ijeri dollar na ulo oru mbo ke ngwaahịa na-enye Turkey si akpakanamde ahịa, ọ lekwasịrị anya ihe mgbaru ọsọ nke na-azara ọnụ ụlọ ọrụ na mba okporo ígwè usoro. National Automotive National steel Mgbanwe [More ...]
7 Hydraulic Culverts na Irmak Zonguldak Line N'ihi nke nro ahụ, Turkish State Railways 2nd Region Procurement Service Directorate (TCDD) nwere oke ịgba nke 2019 TL nwere oke mmachi nke 624287 TL. [More ...]
Ndị ọrụ TÜVASAŞ nyere Ọzụzụ Ọkụ
Turkey n'ụgbọala Industry Corporation (TÜVASAŞ) staffed site firefighters na mbụ responders na ọkụ extinguisher ọzụzụ e nyere ya. Ngalaba na-ahụ maka ọkụ na TÜVASA provided nyere ọzụzụ na ọzụzụ bara uru banyere ọkụ na azịza ọkụ. [More ...]
TCDD 2019 Second GCC Assembly Held
Emere Nzukọ Nzukọ Ọchịchị na TCDD 2019/2 na ntinye aka nke Kenan Çalışkan, Onye isi oche nke ationgbọ njem-Sen, na İbrahim Uslu, Mehmet Yıldırım, Murat Olgun, na ndị isi oche. Onye enyemaka osote onye isi na TCDD General Directorate [More ...]
Egwuregwu Zero Wasted na ọdụ ụgbọ elu Istanbul
A tụlere ụkpụrụ iwu gburugburu ebe obibi na njigide nke IGA na Nnọkọ Njikọ nke Mba Ndị Dị na United States na COP25 nke e mere na Madrid, Spain. Onye isi ndụmọdụ IGA bụ Ulku, onye nyefere okwu na Mgbakọ Zero Waste e mere na 11 nke ọnwa Disemba. [More ...]
Malatya Okporo Willzọ Ga-ezu Ala na Alternzọ Ndị Ọzọ
Obodo Malatya nke obodo ukwu, agba nke mbụ nke ụzọ 25-milo ga-arụ ọrụ ga-esonye n'okporo ụzọ Sivas ga-amalite na nkwụsị nke ọdụ ahụ. Agba nke mbụ nke Obodo Obodo bidoro ọrụ achọ, ụbọchị ole na ole [More ...]
Obodo ukwu, Ankara Private Public Buses (ÖHO) oflọ nke ndị ahịa azụmaahịa mpaghara na mpaghara Adjacent Mpaghara usesgbọ njem njem okporo ụzọ na-arụ ọrụ na imekọ ihe ọnụ [More ...]
Turkey si Mersin Metropolitan Municipality Transportation Engineers mbụ eguzobe
Obodo Mersin mepere emepe ka amata nke mbu n'etiti obodo iji bulie atụmatụ njem na usoro nke obodo. Transport Engineering na Civil Engineering, nke bụ a guzobere ọhụrụ sub-alaka Turkey, kpọmkwem [More ...]